Graphene adụ ihe nkiri kpo oku
Ngwaahịa ọkụ eletrik dị mma, ngwaahịa ọgwụgwọ anụ ahụ kpo oku dị mma iji nye r & d, omenala, mmepụta, lọjistik n'otu ngwọta zuru oke.
Banyere Crown Echiche Enterprise Akwụkwọ ikike ikike Akụkọ ụlọ ọrụ
Ụzọ Mwube na Mmekọrịta
A machibidoro ebe ikpo ọkụ ihe nkiri eletrik na-ekpuchi ihe, a na-atụ aro ka ịhọrọ ngwá ụlọ na ụkwụ iji hụ na ntọhapụ zuru oke nke okpomọkụ.
Biko ebugharịla temometat ka ịzenarị mmebi. Biko ejila ngwá ụlọ kpuchie thermostat, etinyela na ìhè anyanwụ kpọmkwem ma ọ bụ ebe ikuku oyi na-atụ, enweghị ahụ ọkụ gburugburu, ka ọ ghara ịkpata njehie njikwa okpomọkụ. Agbanwela ọnọdụ okpomọkụ.
A machibidoro ịkwọ ụgbọ mmiri, ntu na ACTS ndị ọzọ nwere ike imebi ihe nkiri electrothermal na mpaghara ebe etinyere ihe nkiri electrothermal.
The n'ala ihe onwunwe nke TTWARM electric film adabara n'elu ikpo okwu bụ compound osisi n'ala, na-abụghị gluu n'ala, mkpọchi ụdị ala na ụdị nile nke nkume n'ala, ciment n'ala na na iru mba ọkọlọtọ geothermal n'ala.
Biko adịghị agbanwe mbụ mgbidi Ọdịdị, ọnụ ụzọ na Windows, mma nke ala, dị ka mkpa ịgbanwe, jide n'aka na-agwa ihe onwunwe tupu oge eruo, ka chepụta kwekọrọ ekwekọ mgbanwe na kpo oku. Ụlọ ọrụ ahụ agaghị abụ maka ọdịda ịkọrọ ndị na-ahụ maka ihe onwunwe ma ọ bụ gbanwee omume ịchọ mma ụlọ mgbe echichi nke usoro ikpo ọkụ na-emetụta mmetụta ọkụ.
Nwebiisinka © 2001-2019 TTWARM.Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị Sistemụ kpo oku ala, Igwe ọkụ ụlọ infrared, Ihe mkpuchi akwa akwa ọkụ eletrik, Ihe nkiri na-ekpo ọkụ n'ala, Ihe nkiri kpo oku, Ihe mkpuchi infrared,